people Nepal » राशिफल : असोज २९ गते / अक्टोबर १५ तारिख आईतबार राशिफल : असोज २९ गते / अक्टोबर १५ तारिख आईतबार – people Nepal
राशिफल : असोज २९ गते / अक्टोबर १५ तारिख आईतबार
Posted on October 15, 2017 by Purna Nanda Joshi
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २९ गते आईतबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १५ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथी चन्दमा कर्कट राशिमा प्रातः ०८: ४७ बजे सम्म पश्चात सिंह राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, रमा एकादशीव्रत ग्रामीण महिला दिवस –
सन्तानको निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । मनोरञ्जनका निम्ती अधिक समय खर्चनु पर्ने योग रहेकोछ । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको सामु आफुकमजोर भएको महसुस हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको लगन सिलता अनुरुप आम्दानि प्राप्त रहानले मन प्रशन्न रहनेछ ।
पारिवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । सवारी साधन तथा भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधान रहनु उत्तम रहनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा अग्रसर नरहेकै बेश रहनेछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक समय ब्यतित हुनाले कार्यको प्रतिफलमा ढिलाई हुनसक्छ ।
नयाँ मित्र प्राप्तीको समय रहेकोछ साथै मित्रजन हरुको साथ सहयोग द्वारा अधुराकार्यहरु बन्ने सम्भाबना रहेको छ । मनोरञ्जन पुर्ण यात्राको योग रहनेछ । कार्य सम्पादनको श्रेय तपाईलाई सहजापुर्ण प्राप्त रहनाले मन हर्षित रहनेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले सजग रहनु होला ।
सामान्य बादबिवादको सम्भाबना रहेकोछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले कार्यसम्पादनमा झन्झट पैदा हुनेछ । खानपानको खराबिले स्वास्थ सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अध्यान अध्यापनमा अधिक समय खर्चनु राम्रो हुनेछ । धार्मिक यात्राको सम्भाबना रहेको छ ।
सहि निर्णय हुन नसक्दा परिवारिक कलहको सामाना गनुपर्नेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । स्वस्थ तथा खानपानको क्षेत्रमा बिशेष साबधान रहनु होला ।
फजुल खर्चको योग रहेको छ । मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ । अरुको छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । नयाँ लगानि जन्य कार्यको थालनि नगनू होला ।
आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धोका हुन सक्छ । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
मान्यजनहरुको साथसहयोले कार्य सहज हुनेछ । सामाजिक कार्यमा बिशेष फाईदा हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व हरु सगँको भेटघाट फाईदा मुलक रहनेछ । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ ।
ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ । बिश्वासिलो ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्ला । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । नयाँ कार्य थालनि गर्ने अबसरहरु प्राप्त हुनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । दिन मध्यम रहला ।